Bahrain: Vitsy ny mpanao fihetsiketsehana manoloana ny Masoivohon’i Etazonia · Global Voices teny Malagasy
Bahrain: Vitsy ny mpanao fihetsiketsehana manoloana ny Masoivohon'i Etazonia
Voadika ny 11 Marsa 2011 4:30 GMT
Nisy mpanao fihetsiketsehina mpomba ny demokrasia vitsivitsy nivory teo ivelan'ny Masoivohon'i Etazonia ny Alatsinainy (7 Martsa) niantso ny governemantan'i Etazonia hampitsahatra ny fanohanany ny fitondrana.
Ireto misy fihetsehim-po sasany ao amin'ny Twitter:
@angryarabiya Mahoana no ny fanjakana no tian'ny Masoivohon'i Etazonia henoina , ary ny mpanao politika fa tsy ny vahoaka?? Te-hohenoina fotsiny izahay. #bahrain #feb14
@KawtharAlArab hetsi-panoherana eo anoloan'ny Masoivohon'ny #US any #Bahrain Amin'izao fotoana izao http://yfrog.com/h336eprj miantso ny mpitantana ny Firenena Mikambana mba hanapaka ny fanohanana ny mpanao didy jadona #14feb
Mpanao fihetsiketsehina milanja fanoheram-panjakana eo alohan'ny Masoivohon'i Etazonia
@MaramAbdulaal Fihetsiketsehina manohitra ny fanjakana/mpomba ny demokrasia eo ivelan'ny Masoivohon'i Etazonia ao #bahrain..iza no nifidy ny toerana? http://yfrog.com/h8vkeuj
Mpiambina ny Masoivoho mijery ireo mpanohitra ny fanjakana
@girlpants29 Tsy dia misy dikany ny fitsambikimbikinana eo ivelan'ny masoivon'i Etazonia.Tsy hitanao angaha fa ny fifampiresahana amim-pahakingan-tsaina IHANY no afaka mitondra fanovana any #bahrain ka izany no ataovy!
@foxgluv Tena vitsy ny fandraisan'anjaran'ireo mpanohitra ny governemanta any Bahrain eo @ Masoivohon'Etazonia any Manama. 20 eo ho eo ihany ireo mpanao fihetsiketsehina raha be indrindra…
@SAIDYOUSIF #Bahrain an-jatony ireo mpanao fihetsiketsehina manoloana ny #US #Embassy any manama amin'izao fotoana izao #Feb14 #Lulu
ary ho valiny..
@vickymaus77 @SAIDYOUSIF #Bahrain an-jatony ao amin'ny Masoivon'ny Etazonia? Diso tsotra izao izany! tsy mihoatra ny 50 ny tany! azoko avy amin'ny s.o. izay teny an-toerana izany!